‘जनयुद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरेँ, मलाई कुनै पश्चात्ताप छैन’ – cmprachanda.com
२०७५ मंसिर ५ गते १९:११ मा प्रकाशित
माओवादी सशस्त्र विद्रोहको विधिवत अन्त्य घोषणा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा धेरैको भूमिका रहे पनि मात्र दुई जना पात्रले हस्ताक्षर गर्ने मौका पाए । नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताको एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको केही वर्ष अगाडि नै निधन भयो । अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड विभिन्न राजनीतिक घुम्ती पार गर्दै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्षको हैसियतमा सक्रिय छन् ।
शान्ति सम्झौतापछिका १२ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा अनेकौं जोखिमपूर्ण र नाटकीय मोडहरु आए । कुनै मोडमा दुर्घटना नजिकै पुगे पनि, समग्रमा नेपालको सशस्त्र विद्रोहको अवतरणका लागि प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । शान्ति सम्झौताकै जगमा नेपालमा अन्तरिम संविधानदेखि संविधानसभासम्म, राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म, हतियार व्यवस्थापनदेखि सेना समायोजनसम्म, संविधानसभाबाट समानुपातिक–समावेशी र संघियता आदिको व्यवस्थासहित जारी संविधान निर्माण गर्नमा प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।
तर, प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर माओवादी जनयुद्धलाई धोका दिएको आरोप उनकै केही पूर्वसहकर्मीले लगाउँदै आएका छन् । प्रचण्ड भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कम प्रचार भएको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले न्यून मुल्यांकन गरेको गुनासो गर्छन् । कतिपयले चाहिँ उनको यो भनाइलाई नोबल पुरस्कारप्रति उनको मोहको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गर्छन् । हामीसँगको कुराकानीको क्रममा पनि उनले नोबल पुरस्कारको प्रसंग उठाए ।
शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको अवसर पारेर नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बहुआयामिक पक्षमाथि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले गरेको विशेष अन्तरवार्ता:
–सुरुमै एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न, शान्ति सम्झौता नभएको भए आजको नेपालको तस्बिर कस्तो हुन्थ्यो होला ?
यो प्रश्नको जवाफ पनि तपाईंले भनेजस्तै ‘हाइपोथेटिकल’ नै हुन्छ । मेरो विचारमा अहिले जे–जस्तो राजनीतिक परिवर्तन आए, त्यो सम्भव हुने थिएन । देश अझ ठूलो राजनीतिक अस्थिरतातिर जान्थ्यो । हुनसक्छ, धेरै विघटनका शृङ्खला खडा हुन सक्थे । यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप धेरै बढ्थ्यो । देशको लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्थ्यो ।
त्यतिबेला मेरो र पार्टीको विश्लेषण के रह्यो भने हामीले युद्धद्वारा मात्रै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति छैन । राज्यले पनि हामीलाई पूरै निषेध गर्न सक्ने स्थिति छैन ।
लडाइँलाई लम्बाइराख्ने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले होइन, बाँकी अन्य पक्षले नै फाइदा उठाउँछन् भन्ने निष्कर्षसहित हामी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हौँ । यदि शान्ति सम्झौता नभएको भए सकारात्मक होइन, नकारात्मक नै परिघटना अगाडि जान्थ्यो ।
–शान्ति सम्झौताका एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा यो १२ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अरू पनि सहमति र समझदारीका ‘डकुमेन्ट’ निर्माण गर्यौँ । शान्ति प्रक्रियाका काम छिट्टै टुङ्ग्याउन सकिन्छ; संविधान पनि दुई वर्षमा बनाउन सकिन्छ; सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन साथै सत्यनिरूपण, बेपत्तालगायतका विषय पनि केही महिनामा टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने स्प्रिटका साथ बनाइएका हुन् ती ‘डकुमेन्ट’ । त्यो कोणबाट हेर्दा १२ वर्ष निकै लामो अवधि भयो । धेरै ढिला भयो सबै कुरा टुङ्ग्याउन भन्न सकिन्छ ।
तर, यसखालको राजनीतिक प्रक्रिया, जसको सीधा सम्बन्ध राजनीतिक परिवर्तनसँग छ । बाह्र वर्षमा जे–जति सफलता हामीले प्राप्त गर्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका यस्तै अुनभव हेर्दा हाम्रो धेरै छिटो हो ।
शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील र सबैभन्दा जटिल पक्ष हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन नै थियो । हामीले त्यो सफलतापूर्वक टुङ्ग्यायौँ । संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको सफलतासँगै अरू काम हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ । यसरी हेर्दा यो बाह्र वर्ष का बीचमा जे–जति उपलब्धि हासिल गर्यौँ, राजनीतिक तहमा, संवैधानिक तहमा र शान्ति कायम गर्ने संरचनाको दृष्टिकोणले पनि ती असाध्यै उत्साहवर्धक छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।
यो नेपाल राष्ट्रका लागि मात्रै होइन, विश्वकै लागि पनि एउटा सफल उदाहरण बन्न गएको छ । हाम्रो शान्ति प्रक्रिया जसरी सफल भएको छ, अहिले विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा पनि छ । यो धेरै मौलिक छ र यो ‘होमग्रोन’ छ । नेपालीले आफै बसेर आफ्नै तरिकाले टुङ्ग्याएको शान्ति प्रक्रिया हो यो । त्यसअर्थमा यसका विभिन्न आयामको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । अरू देशमा यस्तैखाले ‘कन्फ्लिक्ट’का समस्या छन् । तिनको समाधानमा यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि चल्ने गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका केही काम त अझै बाँकी छन् । सत्य निरूपण र बेपत्तासँग सम्बन्धित काम छिटै एउटा राजनीतिक समझदारी, संवैधानिक र कानुनीरूपले निष्कर्षमा पुग्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।
-यो बीचमा केही गल्ती र कमजोरी पनि त भए होलान् ?
-गल्ती त होइन होला तर अफ्ठ्यारो चाहिँ के हो ? सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग किन अलमलिरहेको छ ?
नीतिगत, सैद्धान्तिक र संवैधानिक हिसाबले कुनै कमजोरी भएको छैन । हामीले भनेअनुसार नै आयोग बनाएका छौँ । आयोगलाई काम गर्ने म्यान्डेट पनि राजनीतिक र संवैधानिक सहमति बनाउँदा कायम गरेका थियौँ । त्यही म्यान्डेट दिइएको छ । आयोग जति तदारुकताकता र एकरूपताका साथ सामूहिक रूपले अगाडि बढाउनुपर्थ्यो, त्यहाँ केही समस्या देखिए । मैले कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन । वस्तुगत रूपमा त्यहाँ समस्या देखियो ।
अर्कोतिर जुन स्तरको राजनीतिक सहमति र शान्ति प्रक्रियाको स्वामित्व लिएर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनेतिर जानुपर्थ्यो, त्यहाँ पनि केही अलमल देखा परेकै हो । तर, मेरो तर्क के छ भने हामीले जेजति काम टुङ्ग्यायौँ, धेरै ठूला काम टुङ्ग्यायौँ ।
हामीले साँच्चै असाधारण महत्त्वका काम गरिसकेका छौँ । हामी नेपाली आफैले गरेका कामको स्वामित्व लिन अलि तर्सिने भएकाले गर्यौँ कि गरेनौँ जस्तो गर्छौँ । तर धेरै ठूलो काम गरिसक्यौँ । बाँकी रहेका काम, फत्ते गरेका कामको तुलनामा धेरै नै ‘नेग्लिजेन्सिएबल’ हो ।
-नयाँ मुलुकी संहिताले कोही व्यक्ति दश वर्षसम्म बेपत्ता भयो भने त्यसलाई स्वतः मृतक घोषणा गर्ने भन्ने छ । अब शान्ति सम्झौताकै १२ वर्ष पूरा भएर १३ वर्ष लाग्दैछ । के अब राज्यले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरुलाई पनि सामूहिक मृतक घोषणा गर्छ ?
-शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि सुख-शान्ति पाउनु भएन है ?
मेरा लागि यो धेरै गम्भीर प्रश्न हो । म यथार्थमा शान्ति प्रक्रिया र यो राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक ढङ्गले टुङ्गियोस् भन्ने नै चाहन्थेँ । जतिबेला मैले तीन महिने युद्धबिराम गरेर ज्ञानेन्द्रलाई ‘यूएन’मा जानबाट रोक्ने राजनीतिक पहल र शान्तिको वातावरण बनाउने पहल एकलौटी रूपमा गरेँ, त्यो धेरै गहिरो विश्लेषण र निष्कर्षपछि गरेको हो । तपाईंको प्रश्नको पहिलो पाटो भयो यो ।
प्रश्नमा केही सच्चाइ पनि छ । सच्चाइ कहाँनेर छ भने– पार्टीलाई बचाइराख्छु, एकताबद्ध बनाएर राख्छु भन्दा म केही उदार भएँ । आफ्नो मनभित्र यसलाई छिटो टुङ्ग्याऊँ भन्ने हुँदाहुँदै पनि पार्टीको निमित्त धेरै उदार भएँ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा दह्रो स्टेप पछि मात्रै चालेँ ।
पार्टी फुट्ने नै देखेपछि अब लोलोपोतो गरेर ढिला गर्नुको केही अर्थ छैन भन्ने भयो । क्रान्तिका एकदमै ठूला–ठूला कुरा गर्ने साथीलाई प्रचण्डले कहाँ ल्याएर डुबायो भन्ने परेको थियो त्यो बेला । के गर्यो के गर्यो भने जस्तो । मानौँ प्रचण्डले यसो नगरेको भए क्रान्ति भइसक्थ्यो, पूरै सत्ता कब्जा भइसक्थ्यो जस्तो सोचे साथीहरूले । तिनको पनि मन राख्छु भन्दाभन्दै शान्ति प्रक्रियाका काममा ढिला हुन गएकै हो ।
तर, अब जे गरे पनि नहुने भयो भन्ने भएपछि, मेरो मनभित्र जे कुरा थियो, त्यो ड्याङ्का ड्याङ् कार्यान्वयन गरेपछि शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गियो । संविधान पनि बन्यो । सङ्घीय लोकतन्त्र पनि संस्थागत भयो ।
–नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतले धेरै नै स्वामित्व लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ . तपाईंको बुझाइमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कसको कस्तो भूमिका थियो ?
-मुस्लिम धर्मका विरोधी र गैह्र कम्युनिस्टलाई मात्र नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइन्छ भनिन्छ । तपाईं कम्युनिस्ट नभएको भए चैं त्यो पुरस्कार पाउनुहुन्थ्यो कि ?
–शान्ति प्रक्रियामा सँगै आउनुभएका मोहन वैद्य र विप्लजस्ता नेता अहिले तपाईंसँग हुनुहुन्न । उहाँहरूले शान्ति प्रक्रियामार्फत् प्रचण्डले जनयुद्धको अवसान गराए भनेर आरोप लगाउनु भएको छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
नेपालको शान्ति प्रक्रिया असाधारण राजनीतिक परिघटना नै हो । हामीले सफल शान्ति प्रक्रियाको एउटा सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । त्यसलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्न देशका सबै नागरिकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु । Source: ratopati.com (मंसिर ५, २०७५)
अध्यक्ष प्रचण्डबाट अभिभावकत्व ग्रहण गरेका दुई बालकको शैक्षिक प्रगतिबारे जानकारी